२३ बर्षको उमेरमा ११ बच्चाकी आमा ! :: Times of Pradesh
२३ बर्षको उमेरमा ११ बच्चाकी आमा !
एजेन्सी । बच्चासँग घुलमिल हुने रुचाउने रुसकी २३ वर्षीया क्रिस्टिना ओज्टर्कले ११ बच्चाको पालणपोषण गरिरहेकी छन् । तर उनलाई यतिमा मात्र चित्त बुझेको छैन । उनले भविष्यमा कैयौं बच्चाकी आमा बन्ने सोच बनाएकी छन् । न्यूजफ्यास मिडियासँगको कुराकानीमा उनले आफूले ६ वर्षअघि पहिलो पटक छोरीको जन्म दिएको बताइन् । त्यसपछि सेरोगेसीको माध्यमबाट अन्य बच्चाको जन्म भएको उनको भनाइ छ । ती सबै बच्चाहरू क्रिस्टिना र उनका पतिकै जीनबाट जन्मिएका हुन् ।
सेरोगेसीलाई गैरकानुनी नमानिने जर्जियाको बातुमी शहरमा बस्ने क्रिस्टिनाले महिलाहरुलाई सेरोगेसीका लागि प्रयोग गरिरहेकी छन् । त्यहाँका महिलहरुले सेरोगेसीबाट बच्चा जन्माएको ८ हजार युरो लिने गरेका छन् । यदि क्रिस्टिनाको परिवारले चाहेजस्तै १ सयवटा बच्चा जन्माउने हो भने त्यसका लागि ८ लाख युरो ९११ करोड २६ लाख नेपाली रुपैयाँ० खर्च हुनेछ ।